प्रविधि – Banking Khabar
बैंकिङ खबर । विकसित मुलुकहरुमा झन्डै शतप्रतितशत कारोबार नै नगदरहित हुन्छ । सबै कारोबार डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमबाट हुन्छ । क्यासलेश कारोबारलाई नेपालमा पनि प्रोत्साहन गर्ने प्रयार गरिएको छ । जसका लागि थुप्रै प्रविधिहरु नेपाल भित्रिएका छन् । डिजिटल पेमेन्टसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरुको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । कम्पनीको संख्या बढ्दै नेपालमा ईसेवा, खल्ती,
एटीएममा कार्डले काम गरेन ? कार्ड प्रयोग गर्दा अपनाउनुहोस् यी सावधानीहरु
ग्लोबल आइएमई बैंकको क्रेडिट कार्डको लागि अब अनलाइनबाटै आवेदन गर्न सकिने
बैंकिङ खबर । ग्लोबल आइएमई बैंक लि.ले ग्राहकको सहज पहुँच र सुविधालाई ध्यानमा राखी क्रेडिट कार्डको दरखास्त फारम अनलाइन प्रणाली मार्फत भर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै ग्राहकहरुले आफ्नो क्रेडिट लिमिट बुझ्न र कार्ड कसरी पाउने भन्ने सम्बन्धी जानकारी अत्याधुनिक प्रविधियुुक्त अनलाइन प्रणालीको माध्यमबाट पाउन सक्नेछन् । क्रेडिट कार्ड लिन इच्छुक ग्राहकहरुले ग्लोबल
बैंकिङ खबर । नेपाल टेलिकमले ५३ मुलुकका ९९ सेवा प्रदायकसँगको रोमिङ सेवा शुल्कमा एकैचोटी भारी छुट प्रदान गरेको छ । कम्पनीका जीएसएम मोबाइल ग्राहकका लागि उपलब्ध रोमिङ सेवामा यो सहुलियत प्रदान गरिएको हो । कम्पनीले ०७६ बैशाख १६ देखि जिएसएम प्रिपेड मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुका लागि पनि दुई छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा
बैंकिङ खबर । सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डका रुपमा चिनिएको ‘आइसिटी अवार्ड’ को चौथो संस्करण यहि साउन ३२ गते सोल्टी क्राउन प्लाजामा आयोजना हुँदैछ । यस वर्षको आइसिटी अवार्डमा ३ विधाका सर्वोत्कृष्टहरुलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १५ लाखसम्मको सहुलियतपुर्ण विना धितो ऋण दिने जानकारी गराएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आइसिटी अवार्ड २०१९ को बैकिङ पार्टनरको
बैंकिङ खबर । Prabhu Group ले प्रभु पे मोबाईल मार्फत अस्पतालको ओपिडी टिकट मोबाईलबाटै काट्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । अस्पतालमा लामो समय लाईन बसी टिकट लिनु पर्ने समस्याको अन्त्य गर्दै काठमाडौंको सिभिल हस्पिटलबाट मेडिफ्लो सोलुसनले प्रभु पे मोबाइल एप मार्फत घरमा नै बसेर टिकट काट्नसक्ने प्रविधिको विकास गरेको हो । अहिले यो सेवा मार्फत
डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डको बारे बुझनै पर्ने कुरा
बैंकिङ खबर । विश्वमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो रुपमा भएको पाईन्छ । अझ नेपालमा भन्दा विकसित मुलुकमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएको पाईन्छ । नेपालमा पनि प्रविधिले निकै फड्को मारिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डेबिट तथा क्रेडिट कार्डको प्रयोग अत्याधिक रुपमा गरेको छ । डेबिट कार्डको प्रयोग धेरै भएको छ भने
बैंकिङ खबर । नेपाल टेलिकमले न्यूनतम प्याकेज रकमबाट महिनाभरी मोबाइलमा जति पनि (असीमित) कुराकानी गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । संस्थागत प्रयोगकर्ता समूह (Corporate User Group–CUG) योजनामा समाहित भएर ग्राहकहरुले यो सेवा उपभोग गर्न सक्नेछन् । यसका लागि एउटै कम्पनी, संस्था वा कार्यालयमा कार्यरत कम्तीमा पनि १० जना मोबाइल प्रयोगकर्ता हुनुपर्छ । सो भन्दा
‘प्रभु पे’को मूख्य प्रायोजनमा विद्युतीय वित्तीय कारोबार सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न
बैंकिङ खबर । मोबाइल वालेट प्रभु पे को मूख्य प्रयोजनमा आइसीटीको महत्व एवं विद्युतीय माध्यमबाट वित्तीय कारोवार विषयक गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरु नेपालगञ्ज र सल्यानमा गोष्ठी सम्पन्न भएको हो । कम्प्यूटर एशोसियसन अफ नेपाल महासंघ बाँके र सल्यानले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । नेपालगञ्जमा भएको गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिककी
नेसनल बेस्ट प्रिजेन्टेड अनुअल रिपोर्ट अवार्डमा नेपाल टेलिकमलाई रनर अप उपाधि
बैंकिङ खबर । नेपाल टेलिकमले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले वार्षिक रुपमा प्रदान गर्ने नेसनल बेस्ट प्रिजेन्टेड अनुअल रिपोर्ट अवार्डमा रनर अपको उपाधि जित्न सफल भएको छ । विभिन्न विधामध्ये कम्पनीले सामान्य क्षेत्र वर्ग ५ को सेवा क्षेत्रमा सो उपाधि हासिल गर्न सफल भएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक
प्रभु टिभी ओटीटी सेवा अब एनटीसी, एनसेल र स्मार्ट सेलमा पनि
बैंकिङ खबर । प्रभु समुहले सुचना प्रविधिको विकासको क्रमसंगै प्रभु टि.भि. ओटीटी प्रणालीमा आधारित मोबाईल, ट्याबलेट तथा ल्याबटपमा प्रभु टिभी एप्लिकेसन मार्फत हेर्न सकिने गरी उच्च गुणस्तरिय डिजिटल टिभि च्यानलहरुको प्रशारण सेवा प्रारम्भ गरेको छ । अब बिभिन्न सेवा प्रदायकहरु नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट सेलका ग्राहकहरुले पनि सहजै प्रभु टिभी ओटीटी सेवा लिन सक्ने
नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट शूल्क नबढ्ने
बैंकिङ खबर । नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटको शुल्क नबढाउने भएको छ । नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा पनि टेलिकमले ग्राहकको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी कम्पनीद्वारा प्रदत्त इन्टरनेट सेवाको महशुल दरमा वृद्धि नगरेको हो । कम्पनीले आम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ताररहित र तारसहित टेलिफोन सेवा तथा